ရန်ကုန်မြို့လယ်ဧရိယာသို့ နေ့စဉ်ဝင်ထွက်သွားလာနေသူ ခရီးသည်များ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာ ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းဖြင့်သာ အဓိကသွားလာနေကြရ
ရန်ကုန်မြို့လယ် စီးပွားရေး အချက်အချာ မြို့နယ်များသို့ မြို့ပြင် နှင့် မြို့ပတ်မြို့နယ်များမှ နေ့စဉ်ဝင် ထွက်သွားလာနေသူအရေအတွက် မှာ ၃.၃ သန်းခန့်ရှိပြီး အဆိုပါအရေ အတွက်၏ ၈၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များကိုသာ အဓိ ကအားပြု၍သွားလာလျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့လယ်အချက်အချာ ခြောက်မြို့နယ်တွင် ကုမ္ပဏီများ၊ ရုံး များ၊ ရွှေဆိုင်များ၊ စတိုးဆိုင်များ စသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတစ်စု တစ်ဝေးတည်းတည်ရှိသည့်အတွက် နေ့စဉ် နံနက် ၆ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခန့်အထိ မြို့ပတ်နှင့် မြို့ပြင် ဧရိယာမှ လူဦးရေ ၃.၃ သန်းခန့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ၊ ရထားနှင့် အခြားယာဉ်များကို အသုံးပြု၍ ၀င် ရောက်လာကြပြီး ညနေ ၂ နာရီမှ ည ၈ နာရီခန့်အချိန်အထိ ပြန် လည်ထွက်ခွာသွားလေ့ရှိရာ ယင်းအ ချိန်များအတွင်း မြို့လယ်မြို့တွင်း လမ်းမကြီးများပေါ်တွင် ယာဉ်နှင့်လူ ကိုအထူထပ်ဆုံးတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်၏ ခရီးသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်သည် မြို့ လယ်ဗဟိုပြုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်ဖြစ်နေသည့်အတွက် မြို့ပြင်နှင့် မြို့ပတ်မှ ထွက်ခွာလာသည့် ယာဉ် လိုင်းများသည် မြို့လယ်ဆူးလေ စေတီနှင့် မြို့တော်ခန်းမကိုသာ ဦး တည်ပြေးဆွဲနေသဖြင့် မြို့လယ် အဓိကလမ်းမကြီးငါးသွယ်တွင် ရှိနေ သည့် ယာဉ်ရပ်မှတ်တိုင်များတွင် ယာဉ်လိုင်းပေါင်း အနည်းဆုံး ၁၅ လိုင်းမှ အများဆုံး ၄၈ လိုင်းအထိ ရပ်တန့်၍ ခရီးသည် တင်ချလုပ်ရ သည့်အတွက် ယင်းသည် ယာဉ် ကြောကြပ်ပိတ်ဆို့မှုများဖြစ်ပေါ်ရ သည့် အချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ် သည်ဟုကျွမ်းကျင်သူများကထောက် ပြခဲ့ကြသည်။
''ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာ လိုရာခရီး ကို အချိန်တိုတိုနဲ့ သက်သောင့်သက် သာ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ပါ။ ဒီလိုသွား နိုင်မှသာ ကားစီးချိန်ကြာမြင့်လို့ဖြစ် ပေါ်ရတဲ့ စိတ်ညစ်ညူးမှုတွေ၊ သက် သောင့်သက်သာမဖြစ်တဲ့ ကားစီးနင်း သွားလာရမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ စိတ်ဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင် ခရီး သွားပြည်သူများဟာ စိတ်ချမ်းမြေ့ စွာနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်မှာမို့ တိုင်း ပြည်ရဲ့ GDP လဲတက်သွားမှာပါ။ ဒီအထိ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးဟာ တာသွားပါတယ်'' မြို့ပြပို့ဆောင် ရေးရာဆိုင်ရာ သုတေသီတစ်ဦး ဖြစ်သူ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ အသင်းမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင် မြင့်က သုံးသပ်ပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/08/20090အကြံပြုခြင်း
၀၁။ မွန်းတယ်မွန်းတယ် - ဟဲလေး
၀၂။ မြန်မြန်သာပြော - Jenny
၀၃။ ရင်ထဲငြိတယ် -Dယံ
၀၄။ တုန်သွားတာပဲ - ရတနာမိုင်
၀၅။ ၂၀၀၉ သင်္ကြန် - Zone
၀၆။ သင်္ကြန်ဖူးစာ - အိမ့်ချစ်
၀၇။ ဒါသင်္ကြန်ပဲ - အစ္စဏီ
၀၈။ ရေစိမ်ခံ - မေသူ
၀၉။ တွေ့ ဘူးတယ် -waiလျှံ+အိမ့်ချစ်
၁၀။ ရည်းစားလက်မဲ့ -blackhole
၁၁။ ဒီလိုလုပ်လို့ မရဘူး -bluebarry
၁၂။ အချိန်မကုန်ပါနဲ့- သီရိဆွေ
၁၃။ လွမ်းမနေနဲ့- ပူစူး
၁၄။ ကဲကြမယ်ဟေ့ -Ying Ying
၁။ ရင်မောတယ် - ရာဇာနေ၀င်း
၂။ အသည်းလေးအေးသွားတဲ့ထိပက် - မီးမီးခဲ
၃။ နှစ်သစ်ကူးတဲ့လတန်ခူး - ဟက်ကက်၊ စနို၊ စောဖိုးခွား(Ragge)
၄။ ရေတွေဖြည့်ဦး - တွင်ကယ်
၅။ ပိတောက်ပန်းလေး - ရာဇာနေ၀င်း၊ ဂူဂူး
၆။ ပျော်ကြမယ် - ယုန်လေး၊ ဆုပန်ထွာ
၇။ နှစ်သစ်ရဲ့ အချစ်သစ် - ဖိုးသားကြီး
၈။ အနားကိုလာ - ပုလဲဝင်း
၉။ မင်းအခုမှ… - ကုဋာခင်
၁၀။ လွန်လွန်းတယ် - ရသ၊ ယုန်လေး၊ ခရစ္စတီးနား
၁၁။ အိမ်တွင်းပုန်းမလုပ်လိုက်ပါနဲ့- စိုးပြည့်သဇင်
၁၂။ ကြွကြွရွရွက - Nဇိုင်း၊ ခွန်းဆင့်နေခြည်
၁၃။ ရေစိုစိုသင်္ကြန်ပွဲ - မီးမီးခဲ၊ ဆုပန်ထွာ၊ သူသူ
၁၄။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သင်္ကြန် - သားညီ၊ ဇွဲနိုင်ဝင်း၊ ယုန်လေး
၁။ နှစ်သစ်မင်္ဂလာ - ရင်ဂို
၂။ ဖိုးညိုမြ - စည်သူလွင်
၃။ ချမ်းပါတယ် - ဂရေဟမ်
၄။ သက်ြန်မိုးရေ တန်ခုးလေ - ရင်ဂို
၆။ ပိတော် တမျက်နှာ - ဂရေဟမ်
၇။ သင်္ကြန်မိုး - ဂရေဟမ်
၈။ ရေတွေစိုကုန်ပြီ - စည်သူလွင်
၉။ နွေအလှ - ဂရေဟမ်
၁၀။ ပိတောက်လက်ဆောင် - စည်သူလွင်
၁၁။ ဒဂုံမောင် - ဂရေဟမ်
၁။ ရွှေမန်းတောင်ရိပ်ခို - ရင်ဂို
၂။ တူးပို့ တူးပို့ - စည်သူလွင်
၃။ နွေဦးကဗျာ - ဂရေဟမ်
၄။ ရက်မြတ်သင်္ကြန် - ရင်ဂို
၅။ ကမယ်ဆိုတီးပါမယ် - စည်သူလွင်
၆။ နှစ်သစ်ချစ်ဦး - ဂရေဟမ်
၇။ ရွှေဝါမြေ - ရင်ဂို
၈။ သင်္ကြန်လုလင် - ဂရေဟမ်
၉။ ရေပက်ခံမယ် - စည်သူလွင်
၁၀။ မန်းမြို့ သူဇာမေ - ရင်ဂို
၁၁။ သင်္ကြန်မိုးရေ တန်ခူးလေ - ဂရေဟမ်
၁၂။ ရွှေမန်းမာလာ - စည်သူလွင်
၁၃။ နှုတ်ခွန်းဆက် - ဂရေဟမ်၊ ရင်ဂို၊ စည်သူလွင်
၄။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ပါစေ
T-Home ဂီတ သင်္ကြန်သီချင်းများ-၁
၀၁။ မန်းတောင်ရိပ်ခို - မျိုးကျော့မြိုင်
၀၂။ လောင်းလိုက်ဦးပက်လိုက် - အယ်လွန်းဝါ + ဆုန်သင်းပါရ်
၀၃။ နှစ်သစ်ချစ်ဦး - ဖိုးကာ
၀၄။ ချစ်သူလက်မဲ့သင်္ကြန် - ပူစူး
၀၅။ တိတ်တခိုး - ရှင်ဖုန်း
၀၆။ ဖြူနီပြာဝါ - တင့်တင့်ထွန်း
၀၇။ ချမ်းပါတယ် - ဂရေဟမ်
၀၈။ ခဏစောင့်ပေး - ဆုန်သင်းပါရ်
၀၉။ အေးချမ်းတေးသံလတန်ခူးဟေမန် - ချောစုခင်
၁၀။ ရေသူမ - အယ်လွန်းဝါ
၁၁။ ၀ိုင်းပက် - ကြိုးကြာ
၁၂။ T.Home - Group
T-Home ဂီတ သင်္ကြန်သီချင်းများ-၂
၀၁။ ပိုးလေး - ချစ်သုဝေ
၀၂။ ရှက်လို့မနေနဲ့ - ဆုန်သင်းပါရ်
၀၄။ ရေတွေကျန်သေးလား - ခင်ဘုဏ်း
၀၅။ လွမ်း ၃၆၅ ရက် - မိုးမိုး + ရွှေထိုက်
၀၆။ နှုတ်မဆက်ချင်ဘူး - ပူစူး
၀၇။ မြို့မငြိမ်းနဲ့အရင်ဒီလိုပဲ - မာရဇ္ဇ
၀၈။ ဒီအချိန်ရောက်တိုင်း - မိုးမိုး
၀၉။ မင်္ဂလာပါ - အစိုင်း
၁၀။ သင်္ကြန်နှင့်အကြံ - နေဇော် + ကေမီကို
၁၁။ နှစ်သစ်ကြိုပွဲ - လုလု
၁၂။ ရယ်တာပေါ့ - ရင်ဂို
၁၃။ T-Home - Group
ဇော်ဝမ်း - မြို့မသင်္ကြန်
၀၁ - မန်းတောင်ရိပ်
၀၂ - တူးပို့
၀၃ - ရွှေမန်းမာလာ
၀၄ - ဖိုးညိုမြ
၀၅ - ရက်မြတ်သင်္ကြန်
၀၆ - ရွှေဝါမြေ
၀၇ - ရေလောင်းရေပက်
၀၈ - သင်္ကြန်လေညှင်း
၀၉ - ပန်းမြို့တာရာ
၁၀ - ကမယ်ဆိုတီးပါမယ်
၁၁ - ညှင်းသွယ်သွယ်
၁၂ - ပင်နန်းမာလာ
မာစတာသင်္ကြန် ( ၁ )
[url= http://www.mediafire.com/?3imnojebl5y] http://www.mediafire.com/?3imnojebl5y[/url]
[url= http://www.megaupload.com/?d=QR6TLU81] http://www.megaupload.com/?d=QR6TLU81[/url]
မာစတာသင်္ကြန် ( ၂ )
မာစတာသင်္ကြန် ( ၃ )
အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများရဲ့(၂၀၀၉) ခုနှစ် မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန် သံချပ်။
http://sharebee.com/fff15dc4 side A
http://sharebee.com/01ba3bca side B
http://sharebee.com/f71b0390 သံချပ်စာအုပ်အား download လုပ်ရန်- (208KB)
" . . . မြန်မာတို့နှင့် တင်းမာစွာ ဆက်ဆံမည် ဟူသော ဗြိတိသျှတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဥရောပ သတင်းစာများ၌ လည်းကောင်း၊ ဥရောပ ကုန်သည်တို့၏ မကျေမနပ် သံများ၌ လည်းကောင်း၊ သိသာ ထင်ရှား နေပေပြီ။ ထိုကြောင့် မြန်မာမင်းသည် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ နေရလေတော့သည်။ အခွန်တော်များမှာလည်း လျော့ပါး၍သာ လာရာ မန္ဈလေး အစိုးရသည် အစွန်အဖျား ဒေသများကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘဲ တနေ့တခြား လက်လွှတ် ထားရဘိ သကဲ့သို့ ရှိလာလေသည်။ ထို့ပြင် မန္ဈလေး အစိုးရသည် ဗြိတိသျှတို့၏ ခြိမ်းခြောက်မှု များပြားလာခြင်းကို အာရုံ စိုက်နေရ သဖြင့် မိမိ၏ ပြည်တွင်းရေး ကိစ္စများကို အာရုံ စူးစိုက်ခြင်း မပြုနိုင် ရှိခဲ့ရာ တိုင်းပြည်တွင် မငြိမ်မသက် ဖြစ်၍ လာသည် . . . " . . . [၁၉၆၂ ခု၊ ပဌမနှိပ်၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၊ မြန်မာနှင့် အရှေ့တိုင်း ရာဇဝင် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ကျော်သက် ရေးသားတဲ့ 'ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း' စာအုပ် အခန်း (၄) မှ "သီပေါမင်း (၁၈၇၈ - ၁၈၈၅) နှင့် ကုန်းဘောင်ခေတ် နိုင်ငံခြား ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး" အကြောင်းကို ထုတ်နှုတ် ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။]
သီပေါမင်း နန်းတက်စ အခြေအနေ။
ကုန်းဘောင် ထီးနန်းကို ဆက်ခံသော သီပေါမင်းသည် နန်းစည်းစိမ် ခိုင်မြဲရေး အတွက် အစဉ်အလာ အတိုင်း ပြုလုပ်ရာတွင် ထီးနန်းကို လုပ်ကြံမည်ဟု သင်္ကာမကင်းသူ မှန်သမျှတို့ကို သတ်ဖြတ် သုတ်သင်ရလေသည်။ သြဇာ အာဏာ ရှိသူတို့၏ ညွတ်ကွင်း ထောင်ချောက်မှ လွတ်သူ အချို့ တို့သည်လည်း ဗြိတိသျှတို့ထံ ပြေးလွှား ခိုဝင်ကြသည်။ ဗြိတိသျှ စည်းမျဉ်း ဥပဒေ အရ အုပ်ချုပ်ပုံ စနစ်ကဲ့သို့ မြန်မာ့ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ် ဖြစ်ပေါ် လာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ခဲ့သော ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ် ရှောသည်၊ အဆိုပါ သတ်ဖြတ်မှု အခြင်းအရာတို့ကို မြင်သော အခါ သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ် လိုလား စွဲလမ်းကြသော မြန်မာတို့၏ စိတ်ဓာတ်ကို အတွက်မှားခဲ့ကြောင်း သိနားလည် လာလေသည်။ သီပေါ မင်းသား ဘုရင် အဖြစ်သို့ ရောက်၍ နေပြည်တော်ကို သိမ်းလိုက် ပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် သီပေါမင်းနှင့် အပေါင်းအပါ တစုတို့သည် ထားခဲ့သော ကတိသစ္စာကို ထိန်းသိမ်းရန် မလိုတော့ဘဲ အရာရှိ အရာခံ မှူးမတ်များကို ဘုရင့် သစ္စာတော်ခံ လုံးဝ ဖြစ်စေရေး အတွက် သစ္စာရေ တိုက်ရန်သာ အားသစ် နေကြသည်။ ရှော မူကား မကျေမနပ် ဖြစ်၍ မြန်မာ ထီးနန်းကို ဒေါမာန်ပွားကာ၊ မင်းညီမင်းသား ဆွေတော် မျိုးတော်တို့အား သတ်ဖြတ်ခြင်းကို အကြောင်းပြ၍ ထိုသတ်ဖြတ်မှုများကို မရပ်စဲလျှင် နေပြည်တော်မှ သူ ထွက်ခွာ သွားမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်တော့သည်။ နိုင်ငံခြားသား ကုန်သည်စုကလည်း ရှောနှင့် တသံတည်း ထွက်ကြလေသည်။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံရှိ ဘုရင်ခံချုပ် လတ်မင်းကြီး လစ်တန်သည် ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ လိုသည်ဟု အင်္ဂလန်သို့ အကြောင်းကြား တိုက်တွန်း၍ မြန်မာ နယ်စပ်သို့ စစ်တပ်များ ပို့စေလေသည်။
သီပေါမင်းနှင့် မှူးကြီး မတ်ကြီးတို့သည် အင်္ဂလိပ်တို့ ကျေနပ်အောင် လက်ဆောင် ပဏ္ဏာများဖြင့် ကာလကတ္တားသို့ ချစ်ကြည်ရေး မစ်ရှင် အဖွဲ့ တခု စေလွှတ်ကာ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး တည်မြဲမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ပန်ကြားလေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရှိကြသော ဗြိတိသျှ အာဏာပိုင်များကမူကား မိမိတို့ အလိုကျ အတိုင်း မြန်မာတို့က မလိုက်လျောလျှင် မစ်ရှင် အဖွဲ့ကို သရက်မြို့ထက် ကျော်လွန်၍ သွားခွင့် မပေးဟု လည်းကောင်း၊ မဟာဝန်ရှင်တော် မင်းကြီးနှင့်လည်း ဆက်သွယ်ခွင့် မပေးဟု လည်းကောင်း၊ ငြင်းဆိုကြသည်။ ထို ဗြိတိသျှတို့၏ အဆိုမှာ မစ်ရှင် အဖွဲ့သည် သာမန် ချစ်ကြည်ရေး ပြုလုပ်ရန်သာ ဖြစ်၍ အကျိုးထူးလှမည် မဟုတ်သည့် အပြင် မစ်ရှင် အဖွဲ့၌လည်း အမှုတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သော အာဏာမရှိ ဟူ၍ ဖြစ်လေသည်။ ဤတွင် မန္ဈလေး နန်းတော်သည် မစ်ရှင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် သံအမတ်များအား "ပြောရေး ဆိုခွင့် အာဏာများကို သာမက ခေတ္တ စာချုပ် ဖြစ်စေ၊ ရာသက်ပန် စာချုပ် ဖြစ်စေ၊ ချုပ်ဆိုနိုင်ခွင့် ရှိသော အာဏာကို လည်းကောင်း၊ ယခု မျက်မှောက် ဖြစ်ပျက်နေသော နှစ်နိုင်ငံ ပြဿနာ အရေးအခင်းတို့ကို ဖြေရှင်းရေး အတွက် ပြောဆိုနိုင်သော၊ စီစဉ်နိုင်သော၊ တိုင်ပင်နိုင်သော အာဏာကို လည်းကောင်း၊ အနာဂတ်၌ နှစ်နိုင်ငံ အရေးအခင်း ရှုပ်ထွေးမည့် ကိစ္စကြီးငယ် မှန်သမျှကို ပြေလည်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သော အာဏာကို လည်းကောင်း" လွှဲအပ် လိုက်လေသည်။ ရာသက်ပန် ချစ်ကြည်ရေး မဟာမိတ် စာချုပ်တွင် တိုင်းပြည် အသီးသီး၏ အချုပ်အချာ အာဏာပိုင်မှုကို လေးစားခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသား ရာဇဝတ်သားကို ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်သို့ ပေးအပ်ရခြင်း၊ ကုန်သည်များ အခွန် ပေးဆောင်ရန် မလိုဘဲ အခမဲ့ ဝင်ရောက် ကုန်ကူးသန်းခွင့် ပေးခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်လေသည်။
စင်စစ်မှာ ဗြိတိသျှတို့ကလည်း မန္တလေး နန်တော်ကဲ့သို့ပင် မန္ဈလေး နန်တော် အပေါ်၌ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားကြောင်း ပြစေသည် သဘော ဖြစ်လေသည်။ ဗြိတိသျှတို့ ဘက်ကမူ အထက် မြန်မာနိုင်ငံကို နှိမ်နင်းလိုလျှင် အောက်မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗြိတိသျှ စစ်တပ် အပြင် နောက်ထပ် စစ်သည် ၅,ဝဝဝ လိုကြောင်း စစ်ဘက် အကြံပေး အရာရှိက အစီရင်ခံ ထားလေသည်။ ထိုအခါကသော် ဗြိတိသျှတို့သည် အာဖဂန်နီ စတန်နှင့် အာဖရိက တောင်ပိုင်းတွင် နယ်ချဲ့ စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲ နေရသည့် အတွက် မြန်မာတို့ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့လျှင် ဝန်ထုပ် တခု တိုးလာမည် ဖြစ်လေသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာတို့အား နှိမ်နင်းရန် အရေးကို ခေတ္တ ရွှေ့ဆိုင်း ထားကြရလေသည်။
ထိုအချိန်တွင် သီပေါမင်းသည် ခမည်းတော် မင်းတုန်းမင်း အမြှော်အမြင် ကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ သဖြင့် ရအပ်သော အကျိုး ကျေးဇူးတို့ကို ခံစားလျက် နေရသည်။ နန်းတက်စ နှစ်များတွင် မြန်မာဘုရင် အုပ်စိုးသော အထက် တခွင်၌ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးသည် တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုး ခဲ့လေသည်။
အင်္ဂလိပ်တို့ ဆက်ဆံမှု တင်းမာလာခြင်း။
တင်းမာချင်သော ဆန္ဒရှိသည့် ဗြိတိသျှ တို့သည် ၁၈၇၆ ခုနှစ်၌ မန္ဈလေး ကိုယ်စားလှယ် ရှော ကွယ်လွန်သော အခါ ပိုမို၍ ခက်ထန်လာသည်။ ရှော၏ နေရာတွင် ကိုယ်စားလှယ်သစ် ခန့်အပ်ခြင်း မပြုတော့ချေ။ မန္ဈလေးရှိ ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ်ကို မြန်မာတို့က လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ရန် ကြံစည်ကြသည် ဟူသော သတင်းကို ဗြိတိသျှပိုင် အောက်မြန်မာ နိုင်ငံ၌ ပျံ့နှံ့အောင် လွှင့်ကြလေသည်။ စင်စစ်မှာ မြန်မာတို့သည် မိမိ လည်ပင်းကို မိမိ ကြိုးတပ်သည့် အမှားမျိုးကို ကျူးလွန်ရန် အိမ်မက်မျှပင် မက်ရဲကြမည် မဟုတ်ချေ။ ထိုအချိန်၌ မန္ဈလေးသို့ ဗြိတိသျှ ကုန်သည်များ ရောက်လာကြသော အခါ မြန်မာမင်း ကိုယ်တိုင်ပင် ကြည်ဖြူ လေးစားစွာ လက်ခံကြသည်ကို ထောက်ထားခြင်း အားဖြင့် သိနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာတို့နှင့် ဆက်ဆံရန် မဖြစ်တော့ ဟူသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်ရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ဖြစ်သဖြင့် မန္ဈလေးရှိ ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ် သံရုံး အရာရှိ အားလုံးကို ရွှေ့ပြောင်းရန် အမိန့် ထုတ်လိုက်လေသည်။ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် သံရုံး အရာရှိ အားလုံးတို့သည် မန္ဈလေးမှ ထွက်ခွာ ကြလေသည်။ ထိုအခါမှ စ၍ ဗြိတိသျှ မြန်မာ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ပြေလည်စွာ ဆက်ဆံရေး အတွက် စည်းကမ်း နည်းလမ်း အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်မှာ မဖြစ်နိုင်တော့ချေ။
ဥရောပသို့ မစ်ရှင် အဖွဲ့စေလွှတ်ခြင်း။
မြန်မာတို့နှင့် တင်းမာစွာ ဆက်ဆံမည် ဟူသော ဗြိတိသျှတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဥရောပ သတင်းစာများ၌ လည်းကောင်း၊ ဥရောပ ကုန်သည်တို့၏ မကျေမနပ် သံများ၌ လည်းကောင်း၊ သိသာ ထင်ရှား နေပေပြီ။ ထိုကြောင့် မြန်မာမင်းသည် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ နေရလေတော့သည်။ အခွန်တော်များမှာလည်း လျော့ပါး၍သာ လာရာ မန္ဈလေး အစိုးရသည် အစွန်အဖျား ဒေသများကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘဲ တနေ့တခြား လက်လွှတ် ထားရဘိ သကဲ့သို့ ရှိလာလေသည်။ ထို့ပြင် မန္ဈလေး အစိုးရသည် ဗြိတိသျှတို့၏ ခြိမ်းခြောက်မှု များပြားလာခြင်းကို အာရုံ စိုက်နေရ သဖြင့် မိမိ၏ ပြည်တွင်းရေး ကိစ္စများကို အာရုံ စူးစိုက်ခြင်း မပြုနိုင် ရှိခဲ့ရာ တိုင်းပြည်တွင် မငြိမ်မသက် ဖြစ်၍ လာသည်။ ထိုသို့ ပြည်တွင်းရေး မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေခြင်းသည် ဗြိတိသျှတို့၏ ခြေလှမ်းကို ရှေ့သို့ တလှမ်း တိုးစေရန် ဖန်တီးပေး သကဲ့သို့ ဖြစ်လေသည်။
အခြေအနေ တနေ့တခြား ဆိုးဝါးလာသည့် အတွက် မန္ဈလေး နန်းတော်သည် အကာအကွယ် အလို့ငှါ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံကြီးများ၏ အသိအမှတ် ပြုခြင်းကို ရယူရန် ကြိုးစား လာကြ ရလေသည်။ ၁၈၈၃ ခုနှစ်တွင် ဥရောပတိုက်သို့ တကြိမ် ထပ်မံ၍ ချစ်ကြည်ရေး မစ်ရှင် အဖွဲ့ စေလွှတ်ပြန်သည်။
ပြင်သစ် မြန်မာ ဆက်ဆံရေး။
သီပေါမင်းက မစ်ရှင် အဖွဲ့ စေလွှတ်သော ကာလသည် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပ နိုင်ငံကြီးများမှ တပါး ကျန်ရှိသော နိုင်ငံ မှန်သမျှကို ဥရောပ တိုက်သားတို့၏ နယ်ချဲ့ စားကျက် ဒေသ ဟူ၍ ယုံကြည် ယူဆနေသော ဥရောပသားတို့၏ နယ်ချဲ့ ဝါဒ ထွန်းကားနေသော ကာလနှင့် တိုက်ဆိုင် နေလေသည်။ အထူးသဖြင့် ပြင်သစ်တို့သည် နိုင်ငံ ချဲ့ထွင်ရန် လွန်စွာ စိတ်ထက်သန်လျက် ရှိကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဥရောပတွင် တတိယမြောက် နပိုလီယံ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အောင်မြင်မှု မရှိခဲ့သည့် အတွက် အာရှဘက်သို့ လှည့်၍ အာရှ နိုင်ငံများကို သိမ်းပိုက် နယ်ချဲ့ခြင်းဖြင့် ပြင်သစ်တို့၏ အသရေကို ပြန်လည် ဆယ်တင် နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆကောင်း ယူဆသောကြောင့် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထိုအခါကသော် ပြင်သစ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဂျူလဖေရီ၏ နယ်ချဲ့ လမ်းစဉ် အရ ပြင်သစ်တို့သည် အင်ဒိုချိုင်းနား အရေးတွင် စွက်ဖက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်လေရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စွက်ဖက်နိုင်ခွင့် ရလာလျှင် လက်လွှတ်ခံမည် မဟုတ်သည်မှာ သဘာဝ ကျလှသည်။
ပြင်သစ်နှင့် မြန်မာ ဆက်ဆံမှု လွန်စွာ ရင်းနှီးလာလျှင် အရေးအခင်းများ ပိုမို ရှုပ်ထွေး လာမည်ကို ဗြိတိသျှတို့က ကောင်းစွာ သိမြင်ပြီး ဖြစ်လေသည်။ ထို့ကြောင့် မူလ ကထဲက အထက်အောက် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ ဗြိတိသျှတို့တွင် အထူး အခွင့်အရေးများ ရှိကြောင်းကို ဥရောပ နိုင်ငံကြီးများအား သတိ ပေးထားခဲ့သည်။ သဘောမှာ ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံကို လက်ဝါးကြီး အုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး ဖြစ်လေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ဗြိတိသျှ အင်ပါယာတွင်းသို့ ကျရောက်ရန် နီးကပ်လျက် ရှိနေပေပြီ။ ပြင်သစ်တို့သည် ဗြိတိသျှတို့ကို အတိအလင်း ဆန့်ကျင်ခြင်း မပြုနိုင်ချေ။ ဖေရီသည် မြန်မာ မစ်ရှင် အဖွဲ့၏ လိုလားချက်နှင့် မည်ရွေ့ မည်မျှအထိ ပြင်သစ်က ဝင်ရောက် စွက်ဖက်နိုင်သည် ဟူသော အချက်တို့ကို လျှို့ဝှက် ထားလေသည်။ ဗြိတိသျှတို့က အဖန်တလဲလဲ အတင်းအကြပ် မေးမြန်းသည့် အခါကျမှ ဖေရီသည် မြန်မာတို့က ပြင်သစ်နှင့် စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် လိုလားကြောင်းကို ဖွင့်ဟ ဝန်ခံခြင်း ပြုလေသည်။ ၁၈၈၅ ခုနှစ်ဦး၌ ဖေရီသည် ဗြိတိသျှ သံအမတ်အား ပြင်သစ် မြန်မာ စာချုပ် အကယ်ပင် ချုပ်ဆိုပြီးခဲ့ကြောင်း၊ စာချုပ်သည် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး စာချုပ် သက်သက်မျှသာ ဖြစ်၍ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ လုံးဝ မပါကြောင်း ပြောဆိုသည်။ သို့ရာတွင် ထိုစာချုပ်နှင့် အတူ မြန်မာတို့ထံသို့ လျှို့ဝှက် သဝဏ်လွှာ တစောင် ပါးလိုက်သည်။ ထိုစာ၌ အကယ်၍ အင်ဒိုချိုင်းနားရှိ ပြင်သစ် စစ်အရာရှိများကို ဖြစ်နိုင်မည်ဟု ယူဆလျှင် မြန်မာတို့ထံသို့ တုံကင်းနယ် မှတဆင့် လက်နက် ခဲယမ်း မီးကျောက်များ သွင်း၍ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါလေသည်။
မြန်မာ ထီးနန်းသည် ပြင်သစ်တို့၏ မရောရာလှသော ကတိ စကားကို အားကိုး အားထားကြီး ပြုမိလေသည်။ ပြင်သစ်တို့သည် ထိုအချိန်က မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ခဲယမ်းမီးကျောက် သွင်းပေးရန် အကယ်ပင် ရည်ရွယ်ကောင်း ရည်ရွယ် ခဲ့လိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် တကြိမ်တခါမျှ မသွင်းဖြစ်ခဲ့ချေ။ ပြင်သစ် မြန်မာ စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ပြင်သစ်တို့၏ ကူညီမှုသည် အားကိုးလောက်ဖွယ် မရှိကြောင်း သိရတော့သည်။ ပြင်သစ်တို့ လက်နက် အားကိုးဖြင့် နယ်ချဲ့မှုသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေး အရ စရိတ် ကြီးလွန်း၍ နိုင်ငံရေး အရလည်း မတတ်နိုင်သောကြောင့် ပြင်သစ်တွင် မတ်လ၌ ဖေရီသည် ရာထူးမှ လျှောကျ လေတော့သည်။ ထိုအချိန်၌ပင် ဗြိတိသျှပိုင် ဘုံဘေ ဘားမား ကုမ္ပဏီကို မြန်မာ အစိုးရက သစ်ခိုး ထုတ်သည်ဟု စွပ်စွဲ၍ ၁၈၈၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လဆန်း၌ ကုမ္ပဏီကို သစ်ဖိုး စတာလင်ပေါင် ၁၄၆,၆၆၆ နှင့် မြန်မာ သစ်တော အရာရှိများအား လျော်ကြေးငွေ စတင်လင်ပေါင် ၃၃,ဝဝဝ ပေးဆပ်ရမည်ဟု ဒဏ်တပ်လိုက်သည်။ ဗြိတိသျှတို့သည် ဖေရီနှင့် မြန်မာတို့၏ လျှို့ဝှက် အစီအစဉ်ကို သိပြီး ခဲ့ပေပြီ။ မန္ဈလေးရှိ ပြင်သစ် ကောင်စစ်ဝန် ဟတ်စ်၏ ဇနီး အင်္ဂလိပ် ကပြား ဖြစ်သူသည် လျှို့ဝှက်စာ၏ မိတ္ထူကို ခိုးကာ ဗြိတိသျှ အာဏာပိုင်သို့ ပေးအပ် လိုက်လေသည်။ ဤ မိတ္ထူစာကို လက်တွင်း ရလျှင်ပင် ဗြိတိသျှ နိုင်ငံခြားရေးရုံးသည် ပြင်သစ်တို့ကို အဖန်တလဲလဲ ခြိမ်းခြောက် လေတော့သည်။ ပြင်သစ်တို့သည် အခိုက်အတန့် အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်လက် နေကြသော်လည်း ကြာရှည် ခံနိုင်ရည် မရှိသောကြောင့် မြန်မာတို့က ပြင်သစ် အကူအညီကို လွန်စွာ လိုလားနေသည့် အချိန်၌ပင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာ သွားရ လေတော့သည်။
အင်္ဂလိပ်တို့က မြန်မာတို့အား နိုင့်ထက် စီးနင်း ပြုလာခြင်း။
ဗြိတိသျှတို့သည် အထက် မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ရန် နှစ်ပေါင်း များစွာကပင် ပြင်ဆင် ခဲ့ကြသည်။ ကလကတ္တားရှိ ဗြိတိသျှ စစ်ဌာနသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ရန် အဆင့်သင့် စီမံပြီး ဖြစ်လေသည်။ ယခုအခါတွင် ဗြိတိသျှ အစိုးရသည် မြန်မာတို့ အတွက် အကျိုး ပျက်စီးဖွယ် ဖြစ်မည့် တောင်းဆိုချက်များ တင်ပြရန် အချိန် ကျလာပြီ ဖြစ်လေသည်။ ထို တောင်းဆိုချက်များကို မန္ဈလေးက လက်ခံပါကလည်း အထက် မြန်မာနိုင်ငံ အလုံးသည် ဗြိတိသျှ လက်အောက်ခံ အဖြစ် ကျရောက်တော့မည် ဖြစ်သည်။ လက်မခံလျှင်လည်း ဗြိတိသျှတို့၏ အလျင်အမြန် တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခြင်းကို ခံရတော့မည် ဖြစ်လေသည်။ ၁၈၈၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် သစ်ကုမ္ပဏီသို့ လျော်ကြေး တောင်းထားသော အမိန့်ပြန်တမ်းကို မြန်မာ နန်းတော်က ရုပ်သိမ်း၍ ဘုရင်ခံချုပ် ခန့်အပ်လိုက်သော ခုံသမာဓိ အရာရှိကို လက်ခံပြီးလျှင် ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြိုတင်၍ နာယူပါမည့် အကြောင်း တောင်းဆို လိုက်သည်။
ဗြိတိသျှ ကုန်သည်ကြီးတို့၏ ရည်ရွယ်ရင်းကို လန်ဒန် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်း၏ အစီရင်ခံစာတွင် ပွင့်လင်းစွာ တွေ့နိုင်လေသည်။ ထို အစီရင်ခံစာတွင် အထက် မြန်မာနိုင်ငံမှ အခွန်တော်သည် တနှလျှင် စတာလင်ပေါင် တသန်းမျှ ပိုလျှံ နေကြောင်း ပါဝင်လေသည်။ ဂလက်စဂို ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းကမူ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်ရာ အနောက်တောင် ဈေးကွက်ကို ဖွင့်လှစ်ရန် အာသီသ ပြင်းပြလျက် ရှိလေသည်။ ပဲရစ်မြို့တွင် ရှိသော မြန်မာ သံမှူးသည် ဗြိတိသျှတို့၏ အလိုကို မိမိ၏ အရှင်က လုံးဝ လိုက်လျော၍ အရေးခင်း မှန်သမျှ ပြေလည်ရေးကို လည်းကောင်း၊ ချစ်ကြည်ရေးကို လည်းကောင်း၊ အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက် ပါလိမ့်မည်ဟု ဗြိတိသျှ အစိုးရအား အောက်ကြို့ ပန်ကြားရှာသည်။ သို့ရာတွင် ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာသံမှူး၏ ပန်ကြားချက်ကို အသိအမှတ် မပြု လစ်လျူရှု၍ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် မန္ဈလေး နန်းတော်သို့ ရာဇသံစာ ပို့လိုက်လေသည်။
ရာဇသံ စာတွင် အချက်ကြီး ၅ ချက် ပါဝင်သည်။ အရေးကြီးဆုံး အချက်မှာ အထက်မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောင် အနာဂတ် အဖို့၌ နိုင်ငံခြားရေး ဆက်ဆံမှုကို ဗြိတိသျှတို့ကသာ အုပ်စီး ချယ်လှယ်မည့် အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ခန့်တွင် ပြင်သစ်သံမှူး ဟတ်စ်သည် မန္ဈလေးမှ ရွှေ့ပြောင်းမည် ဖြစ်လေရာ ပြင်သစ်တို့၏ အကူအညီကို ရနိုင်ရန် မန္ဈလေး နန်းတော်၏ မျှော်လင့်ချက်သည်လည်း ပြိုကွဲ လေတော့သည်။
ဤ အခြေနေ၌ ဗြိတိသျှတို့၏ တောင်းဆိုချက်များကို မြန်မာတို့က လိုက်လျောနိုင်သည့် တိုင်အောင် မည်မျှ ကြာရှည် ခံမည်ကို မသိနိုင်တော့ချေ။ အမှန်မှာ ထိုထက်မက တိုး၍ ထိရောက်သည့် တောင်းဆိုချက်များကို ဗြိတိသျှတို့က တောင်းဆိုနိုင်သည်။ မြန်မာတို့သည် ဗြိတိသျှတို့၏ အင်အားကို တောင့်ခံနိုင်မည်ဟု မမျှော်လင့်နိုင်သော အခြေသို့ ဆိုက်ရောက် နေလေပြီ။ ထိုကြောင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဗြိတိသျှတို့၏ တောင်းဆိုသမျှသော အချက်အလက်များကို လိုက်လျော ပေးအပ်ရန် အသင့် ပြင်ဆင် ထားကြလေသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာတို့ကို ဗြိတိသျှတို့က နိုင်ငံရေးအရ စိုးမိုးချယ်လှယ်မည့် အချက်ကိုကား မြန်မာ့ ထီးနန်းက လက်မခံဘဲ နေခဲ့လေသည်။
ထိုသို့ လက်မခံဘဲ နေခဲ့သောကြောင့် မိုက်မှားခဲ့ပြီဟု ယူဆလိုလျှင် ယူဆနိုင်ပါ၏။ သို့သော် ယခုခေတ် မြန်မာများသည် လည်းကောင်း၊ အနာဂတ် ခေတ်တွင် ပေါက်ဖွားလာမည့် မြန်မာတို့သည် လည်းကောင်း၊ ဗြိတိသျှတို့၏ နိုင့်ထက်စီးနင်း တောင်းဆိုချက်ကို သတ္တိကြောင်စွာ လိုက်လျောရခြင်းထက် ငြင်းပယ်လိုက်ခြင်းက ပို၍ သင့်တော်သည်ဟု သဘောတူညီ ကြမည်သာ ဖြစ်လေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေးတွင် ဗြိတိသျှတို့ ကြိုးကိုင် ဦးစီးမည့် အချက်အား မြန်မာ ထီးနန်းက အချိန်ဆွဲ၍ စဉ်းစားနေခြင်းကို ဗြိတိသျှတို့က မိမိတို့၏ ရာဇသံစာကို မြန်မာတို့က ငြင်းပယ်သည်ဟု ကောက်ယူလေသည်။ ထိုကြောင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှ အတွင်းဝန် လတ်မင်းကြီး ရန်ဒေါ့ ချာချီသည် အသင့် စီမံထားပြီး ဖြစ်သော ဗြိတိသျှ ဗိုလ်မှူးထံသို့ အထက်မြန်မာနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်ရန် သံကြိုးစာ ပို့လိုက်သည်။ သီပေါမင်းသည် အင်္ဂလိပ်တို့ကို ခုခံရန် ပြည်သူ လူထုကို ဆင့်ခေါ်၍ အရပ်ရပ်မှ စစ်သည် အမှုထမ်းများကိုလည်း စုရုံးသည်။ သို့ရာတွင် ခုခံခြင်း မပြုနိုင်မီပင် ဗြိတိသျှ စစ်တပ်သည် မန္ဈလေးသို့ ရောက်လာလေတော့သည်။
သီပေါမင်းကို လက်နက်ချရန် ဖြောင်းဖျ၍ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် သူရိယ သင်္ဘောဖြင့် တင်ဆောင်ကာ ရတနာဂီရီသို့ ခေါ်ဆောင် သွားလေသည်။ ၁၈၈၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဘုရင်ခံချုပ် လတ်မင်းကြီး ဒပ်ဖရင် အမိန့်ပြန်တမ်း ထုတ်ပြန်သည်မှာ "ဝိတိုရိယ ဘုရင်မကြီး၏ အမိန့်အရ သီပေါမင်း အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ပိုင်နက် ဒေသ အားလုံးသည် သီပေါမင်း လက်အောက်ခံ မဟုတ်တော့၍ အရှင်သခင် ဘုရင်မကြီး၏ ပိုင်နက်တွင် တစိတ် တဒေသ အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ အရှင်သခင် ဘုရင်မကြီး၏ အလိုတော် အတိုင်း ထိုဒေသများကို အိန္ဒိယ ဘုရင်ခံချုပ်နှင့် ဘုရင်ခံတို့က အခါအားလျော်စွာ ခန့်အပ်သွားမည့် အရာရှိများမှ တဆင့် စီရင် အုပ်ချုပ်လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာအပ်သည်" ဟု ဖြစ်လေသည်။ လွတ်လပ်သော အထက် မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း တစခန်း သိမ်း၍ ဗြိတိသျှ အင်ပါယာ အတွင်းတွင် အိန္ဒိယ ပြည်နယ်များ ကဲ့သို့ပင် ပြည်နယ် တခု ဖြစ်လာရ လေတော့သည်။
ကုန်းဘောင်ခေတ် နိုင်ငံခြား ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး
ကုန်းဘောင်ခေတ် နိုင်ငံခြား ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ခရီး မည်မျှ ပေါက်ရောက် ခဲ့သည်ကို ဆန်းစစ်လျှင် ထိုခေတ် ရောင်းဝယ်ရေး အခြေအနေကို နားလည်နိုင်စရာ အကြောင်း ရှိလေသည်။ ၁၇၈၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်သို့ ရောက်လာသော အင်္ဂလိပ် လူမျိုး တဦးက ကုန်းဘောင်ခေတ် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးသည် ကျယ်ပြန့် ရှုပ်ထွေးခြင်း မရှိဟု မှတ်ချက် ချခဲ့သည်။ ဤဒေသတွင် အရင်းငွေ အနည်းငယ်မျှဖြင့်ပင် အရောင်းအဝယ် ပြုပါက အမြတ်အစွန်း များများရရန် လွယ်ကူသည်ဟု သူ ဧကန် သိနေဟန် တူသောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။
ထိုခေတ်က ပြောကြ ဆိုကြသည်မှာ မည်သူမဆို အိန္ဒိယရှိ ကိုရိုမန်ဒယ် ကမ်းခြေ၌ ရွက်သင်္ဘောငယ် တစင်းကို ဝယ်ယူနိုင်သည့် အခြေရှိလျှင် ထိုသင်္ဘော၌ ဆေးရွက် အနည်းငယ်၊ ချည်ထည်နှင့် အိမ်သုံး သံထည် အချို့ကို နဂဘာရီက္ဆွန်းသို့ တင်ဆောင် သွားနိုင်သည်။ ထို့နောက် ထိုကုန်များကို နဂဘာရီ အုန်းသီးများနှင့် လဲလှယ်၍ သင်္ဘော အပြည့်တင်ကာ ပဲခူးသို့ ယူလာနိုင်သည်။ ထိုနောက် ပဲခူးဒေသ (ရန်ကုန်ကို ဆိုလိုသည်) တွင် က္ဆွန်းသစ်များနှင့် တဖန် လဲလှယ်၍ ထို က္ဆွန်းသစ်တို့ကို ကိုရိုမန်ဒယ် ကမ်းခြေ၌ ဖြစ်စေ၊ ဘင်္ဂလား၌ ဖြစ်စေ ရောင်းချပါက၊ အမြတ်အစွန်း ကြီးစွာ ရနိုင်သည်ဟု အပြောအဆို ရှိခဲ့လေသည်။
က္ဆွန်းသစ်သည် စင်စစ်အားဖြင့် နိုင်ငံခြားသား ကုန်သည်များ လွန်စွာ တပ်မက် လိုလားကြသော ကုန်ပစ္စည်းပင် ဖြစ်လေသည်။ အများအားဖြင့် က္ဆွန်းသစ်ကို နိုင်ငံခြားသို့ ရောင်းချရာ၌ သင်္ဘော ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် ရည်ရွယ်သည် ဖြစ်ရာ က္ဆွန်းသစ်များကို တဆင့် တင်ပို့ နေခြင်းဖြင့် စရိတ်စက ကုန်ကျခြင်းကို သက်သာရာ ရစေရန် က္ဆွန်းသစ်ထွက်သည့် နေရာ ဌာန၌ပင် သင်္ဘောများ ဆောက်လုပ်ရန် ကြိုးစားကြမည်မှာ မလွဲပေ။ က္ဆွန်းသစ်ကို လိုရာသို့ တင်ပို့၍ သင်္ဘော ဆောက်လုပ်သည့် စရိတ်နှင့် မြန်မာ့ ပင်လယ် ကမ်းခြေ၌ပင် သင်္ဘော ဆောက်လုပ်သည့် စရိတ်ကို ယှဉ်ကြည့်လျှင် မြန်မာ့ ကမ်းခြေ၌ ဆောက်လုပ်၍ ကုန်ကျသည့် စရိတ်က လွန်စွာ သက်သာနေသည့် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားသားများကို ဆွဲဆောင် နေသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းတွင် သင်္ဘော တစင်း ဆောက်လုပ်၍ အစုံအလင် တပ်ဆင်ပြီးနောက် ရေချရန် အသင့်ရှိသော အခါ သင်္ဘော တစင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် တတန်လျှင် စတာလင်ပေါင် ၁၂ မှ ၁၃ အထိသာ ဖြစ်လေသည်။ ကလကတ္တားတွင် ဆောက်လုပ်လျှင် သင်္ဘောတစင်း၏ ကုန်ကျငွေသည် တတန်လျှင် ပေါင် ၁၆ မှ ၁၇ ဖြစ်၍၊ ဘုံဘေတွင် ပေါင် ၁၉ မှ ၂ဝ အထိ ကုန်ကျသည်။ မြန်မာ ဆိပ်ကမ်းတွင် သင်္ဘော ဆောက်လုပ်ရာ၌ အခက်အခဲများ ရှိသည်။ ထို အခက်အခဲများမှာ ပထမတွင် ရန်ကုန်၌ က္ဆွမ်းကျင်စွာ ကြီးကြပ်မည့်သူ လိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒုတိယတွင် မြန်မာ့ ကမ်းခြေသို့ ရောက်လာသော ကုန်သည်များနှင့် သင်္ဘောများကို လွတ်လပ်စွာ ဆိုက်ကပ်ခွင့် ပေးသည်ဟု မြန်မာဘုရင်က အမိန့် ထုတ်ပြန် ထားသည်ဟု ဆိုသော်လည်း၊ ရန်ကုန်ရှိ မြန်မာ မင်းမှုထမ်းတို့က ကောက်ခံ စည်းကြပ်သော အခွန်ငွေသည် များပြားခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းတွင် သင်္ဘော ကျောက်ချ ပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် သင်္ဘော၌ ပါသော သင်္ဘောသားဦးရေ၊ ပစ်ခတ် ကာကွယ်ရန် ယူဆောင်လာသည့် လက်နက်များ၊ ကုန်ထုပ်များ မည်မျှ ပါကြောင်း အစီရင် ခံရသည်။ သင်္ဘောပါ ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးပြီးသော အခါ၌ အားလုံးကို ကုန်လှောင်ရုံ အတွင်းသို့ ပို့ဆောင်ရသည်။ ထိုကိစ္စများ ပြီးစီးသော အခါ ဝတ္တရား အရ မြို့ဝန် ဖြစ်သူက သင်္ဘောပေါ်သို့ တက်ရောက် စစ်ဆေးသည်။ မြို့ဝန်ွ့ကရောက် ကြည့်ရှု ပြီးသည့်နောက် ပေးဆပ်နေကြ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့်ွွေ့ကပန်းကန်များ၊ သကြားနှင့် လဘက်ခြောက် သေတ္တာများကို ပေးအပ်ရသည်။ ထိုနောက်မှ ရောင်းဝယ်ရေးကို စတင် လေတော့သည်။
ကုန်များကို ရောင်းဝယ်ခြင်း မပြုသေးမီ စစ်ဆေး ကြည့်ရှု၍ အခွန်တော် ကောက်ရန် ကုန်ထုတ်များကို ဖွင့်လှစ်၍ ပြရသည်။ ဘုရင်မင်းမြတ် အတွက် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံ၍ စာရေးများ၊ ကုန်ရုံစောင့်များ နှင့် တံဆိပ်တော် ခပ်နှိပ်သူတို့က ၂ ½ ရာခိုင်နှုန်း အစု ခွဲယူကြသည်။ မင်းတုန်းမင်း လက်ထက် မတိုင်မီကသော် အရာရှိ အရာခံများအား လစာ မှန်မှန်ပေးသော စနစ် မရှိခဲ့သဖြင့် မြန်မာ ဆိပ်ကမ်း အရာရှိ အချို့တို့သည် ပစ္စည်း အမျိုးမျိုးကို တံစိုး လက်ဆောင် အဖြစ်ဖြင့် ယူလို ကြသည်မှာ သဘာဝပင် ဖြစ်လေသည်။
တဦး၏ ထုံးတမ်း စဉ်လာများကို တဦးက နားလည်မှု နည်းပါးသောကြောင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော အထင်လွဲမှုများမှ အပ၊ နိုင်ငံခြား ကုန်သည်များ အဖို့ ကျေနပ်လောက်ဖွယ် ရှိလေသည်။ မကြာခဏ အခက်အခဲ ပေါ်ပေါက်တတ်ခြင်းမှာ အတွေ့အကြုံ နဲသော မာလိန်မှူးနှင့် ကုန်သည်တို့သည် သင်္ဘောဆိပ် လူလိမ် လူကောက်တို့နှင့် ဆက်သွယ်၍ မိမိတို့ ကုန်ကို ရောင်းချရာ၌ ဖြစ်လေသည်။ မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုံးဝ အားကိုး အားထား ပြုနေရသော ဆန်သည် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် လွန်စွာ ဈေးပေါသည့် ကုန်ဖြစ်လေသည်။ ယခုခေတ်တွင် ဆန်ဈေးသည် တတန်လျှင် ကျပ် ၆ဝဝ ရှိ၍ ထိုခေတ် အခါကသော် တတန်လျှင် ၁၄ ကျပ်သာ ရှိလေသည်။ သို့ရာတွင် ထိုခေတ်ကသော် ဆန်ကို ပြည်တွင်းသုံး အဖြစ်ဖြင့်သာ အဓိက စိုက်ပျိုးစေ၍ နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ရန် တားမြစ် ထားလေသည်။ က္ဆွန်းသစ် အပြင် ရန်ကုန်မှ တင်ပို့သော ကုန်းဘောင်ခေတ်ထွက် ကုန်များသည် ရေနံချောင်းမှ ထွက်သော ရေနံချေး ဖြစ်၍ တတန်လျှင် ၃ဝ ကျပ်ခန့် ပေးရသည်။ ရှားစေးကို တနှစ်လျှင် ပိဿာ ၄ဝဝ,ဝဝဝ မက တင်ပို့ ရလေသည်။ ထိုနောက် ဖာလာစေ့ကိုလည်း တင်ပို့ ရောင်းချ၍ တခါတရံ ဆင်စွယ်နှင့် ငွေသားများကို ခိုးထုတ်လေ့ ရှိသည်။ ငမန်းတောင်၊ ငှက်သို့က်၊ ချိပ်၊ ထန်းလျက်၊ ခဲ၊ သံဖြူ၊ ပယင်း၊ မဲနယ်၊ ပုရပိုက်၊ စက္ကူနက်နှင့် ထီးများကိုလည်း ရောင်းချလေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံထွက် အဖိုးတန် ကျောက်မျက် ရတနာများကို နိုင်ငံခြားသား ကုန်သည်များက အထူးသဖြင့် တပ်မက် ကြလေသည်။ ပတ္တမြားနှင့် ကျောက်စိမ်းကို လွန်စွာ လိုလားကြ သော်လည်း ဘုရင်က ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ခြင်း မပြုရဟု တားမြစ်ထားသည်။ နိုင်ငံခြားသား ကုန်သည်များ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ် လူမျိုးများ လိုလားသော အခြား ထွက်ကုန်သည် ဝါဂွမ်း ဖြစ်လေသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ လန်ကက်ရှားယား ဒေသတွင် ထူထောင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ချည်စက်ရုံကြီးများ ကလည်း မြန်မာ့ ဝါဂွမ်းကို လွန်စွာ လိုလားကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင်သာ ဝါဂွမ်းထွက်၍ တရုတ်တို့က ထွက်သမျှသော ဝါဂွမ်းကို ဝယ်ယူ ကြလေသည်။ အပြန်အလှန် အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက ပိုးရိုင်း၊ ပိုးထည်၊ ကတ္တီပါ၊ ရွှေခြည်ထိုး အထည်များ၊ ရွှေခြည်၊ ရွှေဆိုင်း၊ ကော်ဇော၊ ဆေး၊ ကြေးနီ၊ ရောင်စုံစက္ကူ၊ သစ်သီးခြောက်၊ လက်ဖက်ရည်အိုး၊ သံထည်နှင့် ကစားစရာ အရုပ်များကို တရုတ်တို့ထံမှ ဝယ်ယူ ကြလေသည်။